January 3, 2021 - Padaethar
သင့်ချစ်သူက သင့်ကို အရူးအမူးချစ်နေကြောင်း သိနိုင်မယ့် အချက်များ
January 3, 2021 by Padaethar
(1) သူကြိုက်သောအစာများကို သင်နဲ့ခွဲဝေစားခြင်း အထူးသဖြင့် ယောက်ျားတွေဟာ သူများနဲ့အစားဝေမျှစားရတာ မကြိုက်ပါဘူး။ သင့်ချစ်သူဟာ သင် သူ့ပန်းကန်ထဲက ဟင်းတွေနှိုက်စားတာကို ချစ်စနိုးကြည့်နေတတ်ရင် သင့်ကိုအရမ်းချစ်လို့ပါပဲ …။ (2) အသံဖိုင်များပို့ခြင်း ရိုးရိုးစာရိုက်ခြင်းထက် အသံဖိုင်များပို့တယ်ဆိုပါက သင့်ကို ပိုအလေးအနက်ထားကြောင်း သိသာပါတယ် …။ (3) သူ့ဖုန်းကို သင်နဲ့စိတ်ချလက်ချထားခဲ့ခြင်း သူ toilet သွားစဉ် သင့်ထံ ဖုန်းကိုစိတ်ချစွာထားခဲ့ ခြင်း သို့မဟုတ် သင်တောင်းဆိုလို့ သူ့ဖုန်းကိုပြခြင်းဟာ သူ့မှာ သင့်အပြင် တခြားသူမရှိလို့ ဖြစ်ပြီး သင့်ကို ဘယ်လောက်ချစ်မှန်း ပေါ်လွင်ပါတယ် …။ (4) သင်တောင်းဆိုတဲ့အသစ်အဆန်းများအတွက် အမြဲအသင့်ဖြစ်ခြင်း ချစ်သူ၂ဦးကြားမှ အကြိုက်တူတာကော မတူတာကော ရှိတတ်ပါတယ်။ သူမကြိုက်ပေမယ့် သင်ကြိုက်တဲ့ ၀ါသနာနဲ့စိတ်ဝင်စားမှုတွေကို အတူတကွပါဝင်ဆောင်ရွက်တယ်ဆိုပါက သင့်ကိုသူအရမ်းချစ်လို့ပါ … Read more
သင့်ချစ်သူ သင့်ကို အရူးအမူး လွမ်းပြီး ဂရုစိုက်လာအောင် ပြုလုပ်ပေးမယ့် လျို့ဝှက်နည်းလမ်းလေး
ကိုယ့်ချစ်သူ ဒါမှမဟုတ် တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်ကို အရူးအမူးလွမ်းနေအောင် ပြုလုပ်လို့ရတယ်ဆို ယုံမလား။ တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်ကို လွမ်းနေအောင်၊ သတိရနေအောင် ပြုလုပ်လို့ရတဲ့ နည်းလမ်းလေး တကယ်ရှိပါတယ်နော်။ ဒီအချက်လေးတွေက သူ သင့်ကို ပိုဂရုစိုက်လာပြီး သတိရလွမ်းမိနေစေမယ့် အချက်လေးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကို လျစ်လျူရှုပါ သူ့ကို အရင်လို စကားသွားပြောတာမျိုး၊ သူဆီ ကိုယ့်ဘက်က ဖုန်းစဆက်တာမျိုးတွေ မလုပ်ပါနဲ့။ သူ့ စာပို့ထားရင်လည်း ချက်ချင်း စာပြန်တာမျိုး မလုပ်ပဲထားပါ၊ နောက်ပြီး သူဖုန်းဆက်ရင်လည်း ကိုင်ချင်မှ ကိုင်ပါ၊ ပြန်မခေါ်ပါနဲ့။ ဒီလိုမျိုးလုပ်တာက သူ့စိတ်မှာ မေးခွန်းတွေဖြစ်ပြီး သင့်အကြောင်းကို ပိုပိုပြီး တွေးမိနေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကို လွှတ်ထားပေးလိုက်ပါ သင့် ချစ်သူက သင့်ကို ဂရုစိုက်ဖို့ မေ့လျော့နေတဲ့အခါ၊ ဒါမှမဟုတ် … Read more
သင့်ကို ရူးရူးမူးမူးချစ်နေတဲ့ ကောင်လေးဆီကသာ ရနိုင်မယ့်အရာ (၅) ခု
သငျ့ကိုရူးရူးမူးမူးခဈြနတေဲ့ ယောကျြားလေးဆီကသာရနိုငျမယျ့အရာ (၅) ခု ယောကျြားလေးတှဟော မိနျးကလေးတဈယောကျကို ရူးရူးမူးမူးခဈြနပွေီလား ဆိုတာကို သူတို့အမူအရာအားဖွငျ့ သိနိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ သငျ့ခဈြသူဆီက ဒါမှမဟုတျ ယောကျြားလေးတဈယောကျယောကျဆီက ဒီအရာတှကေို ရနတေယျ ဆိုရငျတော့ အဲ့ဒီ့လူက သငျ့ကို ရူးရူးမူးမူးခဈြနလေို့ဆိုတာ သိလုကျပါတော့နျော။ (၁) လာကွိုတယျ သငျဟာ အလုပျမှာပငျပနျးတယျ၊ ကားလမျးတှပေိတျပွီး ပွနျဖို့တောငျ ဝနျလေးနတေဲ့အပွငျကို မိုးတှရှောနတေဲ့ နမြေို့းဆိုရငျ အိမျပွနျဖို့နဲ့ပတျသကျပွီး တအားစိတျညဈနတေတျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အဲဒီ့အခြိနျမှာ သငျ့ခဈြသူက သငျ့ကို အပွုံးလေးနဲ့ လာကွိုပွီး သငျအလုပျပွီးမယျ့ အခြိနျကို မညီးမညူစောငျ့ပေးတယျ ဆိုရငျတော့ သငျ့ကို တျောတျောခဈြလို့ဆိုတာကို သိလိုကျပါ။ (၂) ဘယျသှားသှားလိုကျပေးတယျ ယောကျြာလေးတှဟော လူမြားပွီး စညျကားတဲ့ နရောတှသှေားရတာ သိပျမကွိုကျပါဘူး။အရငျက တဈခြိနျလုံး ဂိမျးပဲထိုငျဆော့နတေဲ့ သငျ့ခဈြသူက … Read more
ယောက်ျားတိုင်း ကြိုက်နှစ်သက်ကြတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်မှာရှိတဲ့အရာ (၅) မျိုး
ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ကို ဆွဲငင်နိုင်ဖို့အတွက် ဘယ်လိုတွေ လုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာ ခေါင်းအပူခံပြီး စဉ်းစားနေစရာမလိုပါဘူး။ အကြောင်းကတော့ လွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့အဖြေလေးတွေ ရှိပြီးသားမို့လို့ပါပဲ။ ခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ ယောက်ျားတိုင်းကြိုက်န်ှစ်သက်ကြတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်မှာရှိတဲ့ အရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ (၁) လွတ်လပ်တယ် ယောက်ျားလေးတွေဟာ လွတ်လပ်ပြီး ကိုယ့်ဖာသာကို ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ မိန်းကလေးတွေကို သဘောကျကြပါတယ်။ တစ်ခုခုဆို ချိတုံချတုံမဖြစ်ပဲ ကိုယ့်ဖာသာကို လွတ်လပ်စွာ ဆုံးဖြတ်နိုင်ပြီး ဆုံးဖြတ်တဲ့အတိုင်းလည်း တာဝန်ယူနိုင်တဲ့မိန်းကလေးမျိုးကို သဘောအကျဆုံးပါပဲ။ (၂) ထက်မြက်ပြီးအလုပ်ကြိုးစားတယ် ယောက်ျားလေးတွေဟာ ကလေးဆန်တာမျိုးတွေကို မနှစ်သက်ကြပါဘူး။ တည်ငြိမ်ပြီးအခြေတကျရှိတဲ့ မိန်းကလေးတွေကို သဘောကျကြပါတယ်။ အလုပ်အကိုင်ရှိပြီး ကိုယ်ပိုင်ဝင်ငွေနဲ့ရပ်တည်နိုင်တဲ့မိန်းကလေးတွေ၊ ထက်မြက်ပြီး အလုပ်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့၊ အလုပ်ကြိုးစားတဲ့မိန်းကလေးတွေဟာ ယောက်ျားတွေရဲ့အမြင်မှာ ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ (၃) စိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုဂရုစိုက်တယ် ယောက်ျားလေးတွေဟာ ရုပ်လှတာကိုကြိုက်ရုံမကပါဘူး။ စိတ်ထားလှတာကိုပါသဘောကျတဲ့သူတွေပါ။ ခန္ဓာကိုယ်အလှကိုလည်း ကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းနိုင်ပြီး၊စိတ်အလှကိုလည်း ဂရုစိုက်နိုင်တဲ့မိန်းကလေးတွေဟာ ယောက်ျားတွေအတွက် ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးပါပဲ။ သွယ်လျကျစ်လျစ်ပြီး … Read more
ယောက်ျား တွေ လက်မလွှတ်နိုင်သော မိန်းကလေး (ကျားမ မရွေး ဖတ်သင့်ပါသည်) ယောင်္ကျား တွေ လက်မလွှတ်နိုင်သော မိန်းကလေး ဆိုတာ လောကကြီးမှာရှိပါတယ်။ ဒီစာလေးကို ယောင်္ကျားလေးတွေရော၊ မိန်းကလေး တွေကိုပါ ဖတ်စေချင်ပါတယ်။ ၀၁. ဥာဏ်ထက်ပြီး သူနဲ့နေရင် ဥာဏ်ရည်တက်လာတယ်လို့ ခံစားရတယ် ဥာဏ်ကောင်းတဲ့ မိန်းကလေး ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ ကိုယ့်ထက်ဥာဏ်ကောင်းလို့ မနာလိုမဖြစ်ပါနဲ့။ လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဟာ အားသာချက်တွေ တူညီမှုမရှိပါ။ ကိုယ့်ကို တိုးတက်စေမဲ့သူက ဘေးနားမှာ ရှိတယ်ဆိုတာ ဝမ်းသာစရာပါ။ ၀၂. ဘယ်အချိန်မဆိုဘေးမှာရှိပြီး အားပေးနေသူ ဘယ်အချိန်မဆိုဘေးနားကနေ အားပေးနေပြီး သူရှိတော့ စိတ်ထဲမှာ တကယ်ကို အေးချမ်းစေပါတယ်။ ၀၃. ကိုယ့်ရဲ့ အားသာချက် ဆိုတာ ဘယ်လဲဆိုတာကို ရှင်းပြပေးသူ အမှားလုပ်မိချိန်၊ အလုပ်ကအဆင်မပြေဖြစ်ချိန်၊ အလုပ်သစ်ကို … Read more
ဘဝလက်တွဲဖော်အဖြစ် ရွေးချယ်ချင်ကြတဲ့ မိန်းကလေးပုံစံ (၄) မျိုး
မိန်းကလေးတွေက ကိုယ့်ရဲ့ ဘဝလက်တွဲဖော်အဖြစ် ရွေးချယ်ချင်ကြတဲ့ ကောင်လေး ပုံစံတွေ ရှိသလိုပဲ ကောင်လေးတွေမှာလည်း သူတို့ လိုချင်မိတတ်တဲ့ မိန်းကလေးပုံစံတွေ ရှိနေပါတယ်။ ကောင်လေးတွေကတော့ သူတို့ ချစ်ရတဲ့ မိန်းကလေးထက် သူတို့ရဲ့ လက်တွဲဖော်ကို ပိုပြီး ဦးစားပေးတတ်ပါတယ်။ ကောင်လေးတွေက မိန်းကလေးတွေကို ဘဝအတွက် ရွေးချယ်ကြတဲ့အခါ …. သူတို့ လိုချင်တဲ့ အချက်တွေကို ကြည့်ပြီး ရွေးချယ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကောင်လေးတွေက သူတို့ရဲ့ လက်တွဲဖော်အဖြစ် ရွေးချယ်တတ်ကြတဲ့ မိန်းကလေး ပုံစံတွေကို ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။ (၁) ပွစိပွစိ အရမ်း မလုပ်တဲ့ မိန်းကလေး ကောင်လေးတွေက မိန်းကလေးနဲ့ မတူတဲ့ ခြားနားချက် ရှိပါတယ်။ တစ်နေ့တာ အလုပ်လုပ်ပြီး အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါ သူတို့ လုပ်ချင်တာလေး လုပ်ပြီး အေးအေးလူလူ … Read more
အိမ်ထောင်ပြုတော့မယ်ဆို သေချာ စဉ်းစားတတ်ဖို့ …
” အိမ်ထောင်ပြုတော့မယ်ဆို သေချာ စဉ်းစားတတ်ဖို့ ” အိမ်ထောင်တစ်ခု တည်ဆောက်တဲ့အခါ ရာနှုန်းပြည့် ပျော်ရွှင်တဲ့ ချစ်ခြင်းကိုရဖို့ …။ အချစ်က ၂၅% နားလည်မှု ၂၅% ငွေကြေးပြည့်စုံမှုက ၅၀% လိုပါတယ်၊၊ တကယ်ချစ်ဖို့ပဲ လိုတယ်… သစ္စာရှိဖို့ပဲ လိုတယ်ဆိုတာတွေက… ဟိုး….အဝေးကြီးမှာကျန်ခဲ့ပါပြီ ။ အပေါ်မှာပြောခဲ့သလို လူနှစ်ယောက် ပေါင်းစည်းဖို့က … အချစ်တစ်ခုတည်းနဲ့ ဘဝကိုအတူ ဖြတ်သန်းဖို့ ဆိုတာ…… ဟိုးအရင်ကတော့ ရှိရင်ရှိခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ အခုခေတ်မှာတော့ မရှိတော့ဘူး။ ငွေတွေဂုဏ်တွေမလိုပါဘူးကိုရယ် ဆိုတာတွေက…… အချစ်မူးတုန်း အချစ်ရူးတုန်း အချိန်ခဏပါ ။ အချစ်မှာ မျက်စိမပါဘူး ။ ဦးနှောက်မှာတော့ မျက်စိပါဖို့လိုတယ်တဲ့ …။ ဒီတော့ မိန်းကလေးဘက်ကလည်း စဉ်းစားပါ ။ ကိုယ်ယူမဲ့ယောက်ျားက ငွေမရှိသော်ငြားလည်း … … Read more